‘शत्रु गते’ को सफल्ता देखेपछि के भने हरिवंशदेखि आँचल शर्मासम्मले ?(भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘शत्रु गते’ को सफल्ता देखेपछि के भने हरिवंशदेखि आँचल शर्मासम्मले ?(भिडियो)
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘शत्रु गते’ शुक्रबारदेखि प्रर्दशनमा आउदा दि गन्दै कुरेर बसेका दर्शक जति खुशी छन् चलचित्रको निर्माण टिमदेखि चलचित्रमा अभिनय गरेका कलाकार पनि त्यतिकै खुशी भएका छन् । शुक्रबारबाट प्रर्दशनमा आएको चलचित्रप्रति दर्शकको उपस्थिति र दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न शनिबार यो चलचित्रका निर्माण टिम तथा कलाकारहरु राजधानीका हलहलमा पुग्न भ्याई नभ्याई गरेको देखिन्थे । बिहान ११ बजे चाबहिलको गोपीकृष्णहलमा चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता किरण केसी, अभिनेता हरिवंश आचार्य, अभिनेत्री दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, अभिनेता पल शाह, अभिनेत्री आँचल शर्मा तथा निर्देशक प्रदिप भट्टराई लगायत कलाकार पुगेका थिए ।
हलमा उपस्थित दर्शकको उभार देख्दा निर्माण टिम तथा कलाकार निकै हर्षित मुद्रमा देखिन्थे । उनीहरु सञ्चारकर्मीको अगाडी निकै हसिलो मुद्रामा उपस्थित भएर बोलेका थिए । प्रस्तुतर्का किरण केसीले पहिलो शो मै मूलुकभर हाउसफूल रुपमा चलेको खबर पाएको बताए । चलचित्रमा दर्शकको भिडभाड त लागेको छ नै त्यो बाहेक पनि चलचित्र हेरेर हलबाट निस्कने दर्शकले चलचित्रको बयान गर्दै धेरै बर्ष पछि राम्रो चलचित्र हेर्न पाएको भन्दा आफूहरु निकै खुशी भएको बताए ।
उनले समग्रमा निर्देशक प्रदिप भट्टराईले सानो सानो कुरामा पनि ध्यान दिएको बताए । त्यस्तै, दिपकराज गिरी र प्रियंककाको अभिनय र डाइलग मन नपराउने कोही नभएको बताए । चलचित्रमा कलाकारले एक अर्काको अभिनयको बारेमा बोलेका थिए । अभिनेता हरीबंश आचचार्यले निर्देशक प्रदिप भट्टराईले सफल नेतृत्वको भूमिका खेलेको बताए । उनले सबै कलाकारसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा निकै खुशी व्यक्त गरे । हरिबंश आचार्यले प्रियंका कार्कीलाई हलिउड कलाकारसँग तुलना गरेका थिए । यो चलचित्रबाट दिपकराज गिरी साँच्चिकै एक्टर भएको बताए । पल र आँचल युवा पुस्ताको ढुकढुकी भएको बताए । त्यसैले यी सबै कलाकारसँग काम गर्न पाउदा आफू निकै खुशी भएको शरिबंश आचार्यको भनाई छ ।
मह सञ्चारको ब्यानरमा निर्मित तथा किरण केसीको प्रस्तुती रहेको चलचित्रमा सामाजिक कथा तथा विवाहमा बाधक बन्ने पात्रहरूको कथालाई समेटिएको छ । चलचित्रलाई प्रदिप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।हाँस्य क्षेत्रका बहुसंख्यक कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्रमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, दीपाश्री निरौला, पल शाह, आँचल शर्मा, राजाराम पौडेल, शिवहरी पौडेल, किरण केसी, बसुन्धरा भुषाल, सुष्मा कार्की, रमेश रञ्जन झा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ र हरिवंश आचार्यको कथा, दीपकराज गिरी र प्रदीप भट्टराईको पटकथा, हरिवंश आचार्य र प्रदीप भट्टराईको संवाद रहेको चलचित्रको तराई र काठमाण्डौमा छायांकन गरिएको हो ।